ACPI MSFT0101 များအတွက်ယာဉ်မောင်း DOWNLOAD - မောင်းသူ - 2019
Device ကို ACPI MSFT0101 များအတွက်ယာဉ်မောင်း Download
နောက်ဆုံးပေါ်လက်တော့ပ်နဲ့ PC ထဲကအတော်များများအသုံးပြုသူများသည် Windows7reinstall မကြာခဏထိ မိ. လဲ "Device Manager" တချို့အပေါ် "အမည်မသိစက်ပစ္စည်း", ID ကိုတူဘယ်ဟာACPI MSFT0101။ ဒီနေ့ device ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်သင်သည်အဘယ်သို့ပြောလိမ့်မည်ဟုနှင့်ယာဉ်မောင်း၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုသူကလိုနေတယ်။
ACPIMSFT0101 များအတွက် drivers
ကျနော်တို့နားလည်ရကြလိမ့်မည်နှင့်အတူစတင်အဘယ်ပစ္စည်းမျိုးကို။ အဆိုပါ encryption ကိုသော့ generate နှင့်သိုလှောင်ရန်တတ်နိုင်သောတစ်ဦး cryptographic Processor ကို: ID ကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ပလက်ဖောင်းမော်ဂျူး (TPM) ကိုဆိုလိုသကပြောပါတယ်။ ဒီ module တစ်ခု၏အဓိက function ကိုမူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်အကြောင်းအရာများအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်ကွန်ပျူတာဟာ့ဒ်ဝဲဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ၏သမာဓိတစ်အာမခံချက်စောင့်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
တင်းကြပ်စွာစကားပြော, ဒီကိရိယာကိုများအတွက်ယာဉ်မောင်းအများပြည်သူဒိုမိန်းထဲမှာမဖြစ်ပါသည်: သူတို့ကတိုင်း TPM များအတွက်ထူးခြားသောဖြစ်ကြသည်။ သို့သျောလညျးမေးခှနျးအတှကျအတွက်ကိရိယာ၏ပြဿနာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်နေဆဲနည်းလမ်းနှစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်အထူးကို Windows updates များကိုပေးဒါမှမဟုတ် BIOS ကို setup ကိုအတွက် TPM ကို disable ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Method ကို 1: မှာ Windows updates များကို Install
အသုံးပြုသူများအတွက်7x64 windose နှင့် Microsoft ၏၎င်း၏ server ကိုဗားရှင်း ACPI MSFT0101 အတူပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်သည့်အသေးစား update ကို, ဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ်
အထက်ပါ link ကိုနှိပ်ပြီးပစ္စည်းအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Hotfix ရရှိနိုင်သော Download".
လာမယ့်စာမျက်နှာတွင်စာတိုက်ပုံး updates များကိုများ၏ဘလောက်လိပ်စာအောက်ကနှစ်ခုနယ်ပယ်များတွင်ထည့်သွင်း, ကိုနှိပ်ပါထို့နောက် patch ကို tick နှင့် "တောင်းဆိုခြင်း hotfix".
ထို့နောက်ထဲသို့ဝင်စာတိုက်ပုံးစာမကျြနှာသွားလာလျက်, ကနေဝင်လာသောမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုစာရင်းရှာ "Hotfix ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှု".
ပွင့်လင်းအက္ခရာနှင့်တစ်ဦးအဖြစ်ခေါင်းစဉ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဆင်း scroll "ပက်ကေ့"။ စာစောင်ကို "တည်နေရာ"ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများကို download လုပ်ပါကနှိပ်ဖို့ link တစ်ခုပါရှိသည်ရာလက်အောက်တွင်။
ကွန်ပျူတာထဲမှာ patch ကိုအတူဇစ်ဖိုင်ကို Download လုပ်ပြီးပါက run ။ ပထမဦးဆုံး window ကိုကလစ်အတွက် "Continue".
ထို့နောက်ထုတ်ယူဖိုင်တွေရဲ့တည်နေရာကိုရွေးပါ, အဲဒီနောက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
အဆိုပါ extractor ပိတ်ပြီး, တဖန်ခလုတ်ကိုနှိပ် "အိုကေ".
သင် installer ကို unzipped ရှိရာ folder ကိုသွားပြီး, နှင့်ကို double-click နှိပ်. က run ။
သတိပေးခြင်း! ကျနော်တို့ကလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမစတင်မီတစ် restore point တစ်ခုဖန်တီးရန်အကြံပြုသောကွောငျ့ဒီ update ကို install လုပ်အချို့ PC များနှင့် laptop တွင်, သငျသညျ, မှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေ!
သတင်းအချက်အလက်များသတင်းစကား installer ကိုစာနယ်ဇင်း "Yes" ကို.
အဆိုပါ installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ဖို့။
အဆိုပါ update ကို install လုပ်ပြီးတဲ့အခါ, installer ကိုအလိုအလျှောက်အနီးကပ်လိမ့်မည်, သင် reboot သတိပေးခံရနေကြတယ် - ဒီလုပ်ပါ။
သို့ Going "Device Manager"သငျသညျထိုပြဿနာကိုတညျ့အဆိုပါ ACPI MSFT0101, နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းသေချာစေနိုင်ပါတယ်။
Method ကို 2: Disable လုပ်ထား BIOS ကိုအတွက်ပလက်ဖောင်း Module အသိမှတ်ပြု
ဒါကြောင့်ကွန်ပျူတာ၏ BIOS ကိုအတွက်ပိတ်ထားနိုင်ပါသည် - developer များ device ကိုပျက်ကွက်သည့်အခါသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းပြချက်တစ်ခု option ကို၎င်းတို့၏တာဝန်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မဖြစ်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။
ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ! အောက်ပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူများအတွက်ဒီဇိုင်း, ဒါကြောင့်သင်ကသူတို့ရဲ့အစွမ်းအစ၌ယုံကြည်မှုမဟုတ်လျှင်, ယခင် method ကိုအသုံးပြုနေပါသည်!
ကွန်ပျူတာကိုပိတ်ထားပါနှင့် BIOS ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ, BIOS ဝင်ရောက်ဖို့ဘယ်လို: ဆက်ဖတ်ရန်
အဘယ်အရာကို CMOS Setup ကိုအမျိုးအစားပေါ်မူတည်လာမယ့်ဖြစ်ပျက်။ အဆိုပါ AMI BIOS ကိုတွင် tab ကိုဖွင့်လှစ် "အဆင့်မြင့်", ထို option ကိုရှာပါ "ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ကွန်ပျူတာ", မြှား step ကိုသွားပါ "TCG က / TPM ပံ့ပိုးမှု" နှင့်ရပ်တည်ချက်ထဲမှာ install "မဟုတ်ပါ" ဝန်လေးသော ဝင်ရောက်.
အဆိုပါဆုချီးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဖီးနစ် BIOS ကိုတွင်သင် tab ကိုသှားဖို့လိုအပျ "လုံခြုံရေး" နှင့်ရှေးခယျြ "TPM".
ထို့နောက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဝင်ရောက်မြှားတို့ကို option ကို Select လုပ်ပါ "မသန်စွမ်း" နှင့် key ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်အတည်ပြု ဝင်ရောက်.
BIOS ကို key ကိုအကျင့်ကိုကျင့်၏အရှိဆုံးအမျိုးအစားများအတွက် (ပြောင်းလဲမှုများကို save F10) ထို reboot ။ သင်ရိုက်ထည့်ပါလျှင် "Device Manager" စနစ် booting ပြီးနောက်သင်ဟာ့ဒ်ဝဲစာရင်းထဲတွင် ACPI MSFT0101 ၏မရှိခြင်းသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။
ဤနည်းလမ်းကိုတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချ module များအတွက်ယာဉ်မောင်းနှင့်အတူပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူက software ကိုမရှိခြင်းကြောင့်ပေါ်ထွန်းသည်ဟုပြဿနာများကိုဖြေရှင်းဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
စုစည်းတင်ပြရန်, ကျနော်တို့သာမန်အသုံးပြုသူများအမရှိသလောက်ဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ပလက်ဖောင်း Module စွမ်းရည်လိုအပ်ကြောင်းသတိပြုပါ။